my kitchen my life: ကျွန်တော်သိသော sauce အကြောင်းများ ၅
ကျွန်တော်သိသော sauce အကြောင်းများ ၅
( bolognese in Italian, also known by its French name sauce bolognaise )
ingredients : minced beef,butter,olive ,oil, onion, carrot, garlic, celery, bay leaf, tomato past, tomato sauce, red wine, flour, olive oil, salt and pepper, cardamon stick. if u like u can add pork.sometime we can call meat sauce.
ဘိုလိုးနိစ် ခေါ်ပါတယ်. bay leaf , cardamon stick ကို olive oil နဲ့အရင် ဆီသက်.ပြီးရင် carrot,celery, onion ကို chop လုပ်ပြီး ထည့်...နည်းနည်းနွမ်းလာလျှင် minced meat ထည့်။ color chain လျှင် flour နည်းနည်း ထည့်၊ သမအောင် မွှေ၊ ပြီရင် black pepper and salt , beef stock ရယ် tomato past ထည့်ပါ။ tomato peel ကို blander နှင့် မွှေပြီးထပ်ထည့်။သမအောင် မွှေပြီးလျှင် ရေ water ထည့်။ ၅မိနစ် ခြား တခါမွှေပေး..ကပ်တက်သည်။ရေနည်းနည်း ခမ်းလာလျှင် မီးလျှော့ပြီး မီးအေးအေးနှင် ၁ နာရီလောက်ချက်ပါ။
များသောအားဖြင့် တော့ spaghetti pasta နဲ့ တွဲစားတာများပါတယ်။
Posted by leo mark at 5:14 PM